अनुहारमा किन आउँछ कनिका जस्तो सेतो, पहेंलो रङको दाना ? यसरी पाउनुहोस् छुटकारा – Online Nepalaja
February 6, 2021 68
काठमाडौँ । अनुहारमा कनिका जस्तो देखिने सेतो, पहेंलो रङको कडा बल जस्तो दानालाई मिलिया भनिन्छ।
मिलिया मुख्यगरी अनुहार, नाक, गाला तथा आँखाको तल्लो भागमा आउँछ। मिलिया सामान्यतयः साना आकारमा देखिने गर्छन्। तर, यसको आकार दुई मिलिमिटर सम्मको हुनसक्छ।
मिलिया के हो ?
वयस्कमा आउने मिलिया कुनैकुनैलाई मात्र छिटो निको हुने गर्छ। धेरै जस्तो मिलिया लामो समयसम्म अनुहारबाट जाँदैन। यदि लामो समयसम्म मिलिया गएन भने आफैंले कोट्याउने, निचोर्ने गर्नु हुँदैन्।
छालामा कुनै पनि समस्या नपरे पनि सुन्दरताको हिसाबले असर पारिरहेको हुन्छ। मिलिया आउँदा अनुहारको सुन्दतामा कमी आउने हुँदा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञलाई देखाउनु पर्छ। चिकित्सको सल्लाह अनुसार क्रिम, मल्हमको प्रयोग गरेर पनि मिलियालाई हटाउन सकिन्छ।
अन्य उपचारमा चिकित्सकले सियोको टुप्पोले मिलियालाई निकालेर फाल्छन्। आजभोलि लेजरको माध्यबाट पनि मिलियाको उपचार गर्न सकिन्छ।
Prevलन्च भयो स्प्लिट सिट सहितको सबैभन्दा सस्तो बजाज पल्सर १२५
Nextसुनौलो रङ्गको नाग देवताको दर्शनले मात्रपनि तपाईको भाग्य खुल्छरे,पूरा पढौं र शेयर गरौं ॐॐॐ
आमा नाता पर्नेलाई जब युवकले बेहुली बनाएर गाउँमै ल्याए (भिडियो हेर्नुस्)
यस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ क्यान्सरको उच्च जोखिम, यी संकेत देखिए वेवास्ता नगर्नुहोस्
फिल्म राजा हिन्दुस्तानी रिलीज भएको २४ बर्ष पछी थाहा भयो यस्तो पर्दा पछाडीको वास्तविक कुरा… (3158)
क्यामेरामा रेकर्ड नभएको भए कसैले पत्याउने थिएन यो घटना, जान्नका लागी भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस (2770)
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित् (1441)
सुतेका थिए उनि….. तर उठ्दा विश्वभर भाइरल भैसकेका थिए (तस्विर सहित) (386)
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (371)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (365)
पूरा हेर्नुहोस मात्र9लाख 99 हजार मा घर बिक्रीमा (324)